Dagaal ay ka qeyb qaateen dayuurado wax duqeeya oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo
Faahfaahin ayaa ka soo baxeysa dagaalo culus oo shalay ka dhacay degaano ku dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose kaasoo dhexmaray ciidamada maamulka Jubba iyo xoogaga Al-shabaab.
Dagaalkan oo khasaare badan dhaliyey ayaa bilowday markii ciidamada maamulka Jubba ay weerareen fariisimo Al-shabaab ku leeyihiin dhul howd ah oo ku yaala meelo ku dhow Kismaayo.
Labada dhinac ayaa dagaalamayey saacado badan, iyagoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jireen madaafiic iyo rasaas ka dhaceysay qoryaha culus ee ku rakiban gaadiidka dagaalka.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalka ay markii dambe ku biireen dayuurado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Kenya kuwaasoo ka koobnaa Helicobtaro gacan siinayey ciidamada maamulka Jubba, isla markaana weerarayey goobaha ay difaaca kaga jireen xoogaga Al-shabaab.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalkaas ay labada dhinac isaga gubeen gaadiid dagaal.
Qiyaastii 20 ruux oo labada dhinac isugu jiray ayaa dagaalkaas ku dhimatay halka 50 kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya goobaha lagu dagaalamay oo saaka degan hase ahaatee ay weli isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac, iilaa haddana saraakiisha Jubba iyo Al-shabaab faahfaahin kama bixin dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu cuslaa ee mudooyinkan ka dhaca halkaas.